SADDAAM XUSEEN: DIKTAATOORKII NASIIBKA XUMAA.
Saddaam xuseen waa laqabtay. Beenta naga daa. Yaa kuu sheegay inuu Saddaam yahay. Waa beentii Maraykanka. War Sawirkiisii ayaa la keenay. Wey cadahay inuu isagu yahay. Hadalaas iyo kuwa lamid ah, waxay ahaayeen doodihii ay dadka shalay ilaa manta ay isla dhexmarayeen. Qof jeclaa iyo qof necaaba shalay Sadaam waa la hadal hayey.
Anigu laftayda waxaan ka mid ahaa dadka wakhtiga badan ku lunshay, 7.Saacadood oo xiriir ah ayuu iga qaatay raad-raaca warka Saddaam. Waana arin mudan in wakhti intaa ka badan lagu lumiyo. 8.fiidnimo ee habeenkii Sabtida ayaa gacanta lagu soo dhigay Madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddaam Xuseen, isaga oo ku dhexjiray Sanduuq uu dhulka hoostiisa dhigtay, oo 7.Mitir hoos u qodnaa, malaha naxashkiisii ayuu sii diyaarsaday, waxaa loogu tagay sida uu sheegay Afhayeen u hadlay W/Gudaha ee Ciraaq, iyadoo ay agyaalaan Qori AK. Ah iyo Bastoolad, banaankana ay u yaaleen Gaari uu isagu lahaa iyo mid kiro ah, sidoo kale Helo-Kabtar, uu midhaa ugu talagalay inuu ku baxsado.
Goortii ay Askarigii u horeeyey is arkeen, wuxuu ku yiri hadaladan. ( Anigu waa Saddaam Xuseen, Anigu waa Madaxweynihii Ciraaq, waxaan rabaa wadahadal. Askarigii wuxuu ugu jawaabay. Anna waxaan salaan kaaga wadaa Madaxweynaha Maraykanka) Sadaam si sahal ah ayuu isu dhiibay, mana muujin habayaraatee wax iska caabin ah, lacagtuu sitay mar waxaa lagu sheegay 750.kun oo Doolar, qaarna weyba ka badiyaan intaas.
Waxaa la tusay qaar katirsan madaxda golaha talada ee Ciraaq, oo uu ku jiro Cadnaan, iyo Rubayci, waxayna sheegeen inaysan wax murugo ahi ka muuqan Saddaam, markii la weydiiyey Hubkii la sheegay inuu haysto, wuxu ku jawaabay, taasi waa beenta uu Maraykanku abaabulay, dagaaladii Iiraan, Kuwayt iyo Suntii uu Kurdiyiinta ku shubayba, wuu difaacay. Wuxuu yiri waxaan ahay Madaxweynihii Xaqa ahaa, oo Caadilka ahaa. Marna wajigiisa naxdin lagama dareemin, aad ayuu u daganaa, sidaas ayey ku tilmaameen raggii soo arkay.
Inuu Saddaam Xuseen yahay waxaa u xaqiijiyey Daariq Caziiz oo ahaa ku xigeen-kiisii, hadana Ciidamada Maraykanka ay gacanta ku hayaan, sidoo kale Baaritaan lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday inuu yahay Saddaam Xuseen, waxaana T.V.yada Caalamka la iska tusay iyadoo uu wiil dhalin yaro ah uu Carabkii dhacaan ka qaadayo, isaguna uu Garkiisa taataabanayey, kolkii danbana uu cabaar gacanta ku haystay garkiisa, sidii qofka mashquulsan.
Wuxuu u muuqday nin daalan, waxaana ka muuqatay diif aad u liidata, iyo duqnimo saa’id ah, timuhuna waa ay ku baxeen, wuxuu u ekaa qof caalwaa ah. Su’aalaha taagan waxaa kamid ah, yaa dhiibay oo ka shaqeeyey in sedan sahalka ah loo helo Saddaam Xuseen. Jawaabtaas hada iyadoo cad lama hayo laakiin wakhtiga dhaw ayaa ka jawaabaya, waxaanse shaki ku jirin in dad isaga u dhawdhaw ay arintaa ka shaqeeyeen, warbaahinta qaarna waxay tilmaameysaa in la dabagalay xiriit Telefon uu uu la sameeyey dad isaga qaraabadiis ah, waxaa kaloo la sheegayaa in dad dhawaan la qabqabtay ay tilmaamo bixiyeen halka uu jooga Saddaam.
Qareeno Carab ah oo Saddaam difaacaya
Haweeneyda qareenada ah ee la yiraahdo Bushra Al- khaliil oo u dhalatay dalka Lubnaan ayaa.. Guji [Warbixintii Ikraam]
Aqoonyahanno ka tirsan Wasaarada Caddaalaa ee dalka Masar ayaa ka shaki qaba in Saddaam Xuseen loo adeegsaday sun, taaso ay dhici karta bey yiraahdeen in aaggii uu ku jiray la sumeeyey si uusan wax is difaac ah ama dhaqdhaqaaq ah u samayn, ama in markii gacanta lagu dhigay la siiyey wax maankiisa dooriya, fikradaasna waxaa ku abuuray raggan khubarada ah markii ay arkay sida uu u dhaqmayo Saddaam, iyo sida uusanba isu shideyneynin, waan tuhun maan gal ah.
Saddaam Xuseen oo ahaa Diktaatoorkii ugu foosha xumaa ee dhawaan soo mara Dunida Carabta iyo Caalamkaba ayey noloshiisii ku dhamaaneysaa in gacanta lagu soo dhigo isagoo kaligiis ah, waayeyna cid difaacda ama ilaalisa, Tekriit oo ah halka uu ka soo jeedo, ayaa manta laga soo qabtay isagoo kaligiis ah, waana halka uu beel ahaan ka soo jeedok. R/Tikriitna haddii ay shalay ku faanayeen inuu Madaxweyne ka dhashay, manta isagoo kaligiis ah ayaa laga soo dhex jiitay.
Madaxda Caalamka ayaa aad ugu faraxday soo qabashada Saddaam Xuseen, Jarmalka iyo Faransiis-ka ayaa ugu horeeyey madaxdii tahniyada u dirtay Buush. R/Wasaaraha Ingiriiska ayaa ku tilmaamay soo qabashada Saddaam guul ay gaareen R/Ciraaq, Buushna wuxuu qarsan waayey farxadiisa, waxayna u tahay guulaha uu ku faani doono mustaqbalkiisa Siyaasadeed, waxaana la tilmaamayaa iney tartanka doorashada wax weyn u kordhin doonta.
Madaxda Carabta ayaa iyaguna hal eray kuwada hadlay oo ah, waa in shacabka Ciraaq talada lagu wareejiyaa, Ciidamada ajnabiga ahna ay wadanka ka baxaan, waxayna marnaba soo qaadin waxa ku dhacay saaxiibkoodii Saddaam ee ay shalay dhihi jireen waa Geesigii Carabeed, waa Hogaamiye Carbeed, waxaad mooda iney cadaatay nin dhintay kabihiisa dhaama.
Saddaam Xuseen noloshiisa oo dhan waxa uu ku qaatay hal xiraale, hadana waxa uu ku dhamaystay hal xiraale, ilaa iyo hadda lama fahmin sababtii uu 8.Sano ula dagaalamyey Iiraan, Sababtii uu u qabsaday dalka Kuwayt ee dariska la’ah, sidoo kale lama fahmin, waxa keenay sidii sahalka ah ahayd ee Bagdaad ay u gacan-gashay, hadana waxaan la garan sida fudud ee uu Saddaam ku gacan galay.
Xusuusnow in soo qabashada Saddaam Xuseen ay wali tahay, warka Maraykanka, maxaa yeelay mahayno ilo kale oo arintaa cadaynaya, waxaase hubaal ah in maalaha soo socda ay si weyn u kala cadaan doonto.